स्थानान्तरण कर मा परिवर्तन: सुरु र लगानीकर्ता ध्यान! | Law & More B.V.
ब्लग » स्थानान्तरण कर मा परिवर्तन: सुरु र लगानीकर्ता ध्यान!
स्थानान्तरण कर मा परिवर्तन: सुरु र लगानीकर्ता ध्यान!
डिसेम्बर 22, 2020
२०२१ एक वर्ष हो जहाँ कानून र कानूनको क्षेत्रमा केही चीजहरू परिवर्तन हुनेछन्। ट्रान्सफर ट्याक्सको सन्दर्भमा पनि यो नै हो। नोभेम्बर १२, २०२० मा, प्रतिनिधि सभाले हस्तान्तरण करको समायोजनको लागि विधेयकलाई अनुमोदन गर्‍यो। यस विधेयकको उद्देश्य भनेको लगानीकर्ताहरूको सम्बन्धमा आवास बजारमा सुरूवात गर्ने स्थिति सुधार गर्नु हो किनभने लगानीकर्ताहरू प्राय: छिटो घर किन्नको लागि छिटो हुन्छन्, विशेष गरी (ठूला) शहरहरूमा। यसले घर खरीद गर्न सुरु गर्नेहरूको लागि बढ्दो कठिनाइ बनाउँदछ। तपाईं यो ब्लगमा पढ्न सक्नुहुन्छ जुन १ जनवरी २०२१ देखि दुबै कोटीहरूमा परिवर्तनहरू लागू हुनेछ र परिणाममा तपाईंले केमा ध्यान दिनुपर्नेछ।
विधेयकको माथि वर्णन गरिएको उद्देश्य साकार गर्न २०२१ देखि दुई परिवर्तन, वा कम्तिमा पनि उपायहरू हस्तान्तरण करको क्षेत्रमा पेश गरिनेछ। यो आशा गरिन्छ कि यसले स्टार्टर खरीददारहरूले आवास लेनदेनको संख्या बढाउनेछ र लगानीकर्ताहरु द्वारा आवास लेनदेन कम।
यस सन्दर्भमा पहिलो उपाय सुरुवातकर्ताहरूमा लागू हुन्छ र संक्षेपमा, स्थानान्तरण करबाट छुट हुन्छ। अर्को शब्दमा, शुरुवातकर्ताहरूले अब १ जनवरी २०११ देखि स्थानान्तरण कर तिर्नु पर्दैन, ताकि घर खरीद उनीहरूको लागि सस्तो भयो। छूटको नतीजाको रूपमा, घरको मूल्य सम्बन्धित वृद्धिमा निर्भर घरको खरीदसँग सम्बन्धित कुल लागतहरू वास्तवमै कम हुनेछ। कृपया नोट गर्नुहोस्: छुट एक बन्द छ र घरको मूल्य १ अप्रिल २०२१ देखि ,1००,००० डलर भन्दा बढी हुन सक्दैन। थप रूपमा, छुट यो मात्र लागू हुन्छ जब सम्पत्ति हस्तान्तरण सिभिल-कानून नोटरीमा वा १ पछि हुन्छ। जनवरी २०२१ र खरीद सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने क्षण निर्णायक हुँदैन।
अन्य उपाय लगानीकर्तासँग सम्बन्धित छ र यसको अर्थ हो कि उनीहरूको अधिग्रहण १ जनवरी २०२१ देखि उच्च सामान्य दरमा कर लगाइनेछ। यो दर उल्लेखित मितिमा%% बाट% %मा बढाइनेछ। शुरुवातकर्ताहरूको विपरीत, यसरी घर खरीद गर्न लगानीकर्ताहरूको लागि यो महँगो हुन्छ। उनीहरूको लागि, घर खरीद संग सम्बन्धित कुल लागत बिक्री कर दर मा वृद्धि को एक परिणाम को रूप मा वृद्धि हुनेछ। संयोगवश, यो दरले व्यवसाय परिसर सहित गैर-आवासको अधिग्रहण मात्र कर गर्दैन, तर आवासको अधिग्रहण पनि प्रयोग गर्दैन वा अस्थायी रूपमा मुख्य निवासको रूपमा प्रयोग गरिने छैन। यस सन्दर्भमा, हस्तान्तरण कर को समायोजन को लागि बिल को व्याख्यात्मक ज्ञापनपत्र अनुसार, उदाहरण को लागी, एक छुट्टी घर, आमाबाबुले आफ्नो बच्चाको लागि किनेको घर र प्राकृतिक व्यक्तिको द्वारा किन्न नसकेका घरहरु लाई विचार गर्नुहोस्। व्यक्तिहरू जस्तै आवास कर्पोरेसनहरू।
स्टार्टर वा लगानीकर्ता?
तर तपाईंले कुन उपाय मनमा राख्नु पर्छ? अर्को शब्दहरु मा, तपाइँ एक स्टार्टर वा एक लगानीकर्ता हो? चाहे कसैले वास्तवमै पहिलो पटक मालिकले कब्जा गरेको आवास बजारमा प्रवेश गरिरहेको छ र यसभन्दा पहिले कहिल्यै घर अधिग्रहण गरेको छैन, यस प्रश्नको उत्तर दिनको लागि सुरूवात बिन्दुको रूपमा लिन सकिन्छ। यद्यपि कसले स्टार्टरमा छुट पाउन योग्य छ र कसलाई टर्नओभर कर दर बढाइन्छ, यो मापदण्डको आधारमा निर्धारण गरिएको छैन। यस छुटका लागि खास फरक पर्दैन यदि तपाईं एक खरीददारको रूपमा पहिले नै पहिले नै एउटा घर स्वामित्व पाउनुभयो भने। अर्को शब्दमा, यो घर छुटको लागि योग्य हुनको लागि तपाइँको पहिलो मालिक-कब्जा गरिएको घर हुनुपर्दैन।
स्थानान्तरण करको समायोजनको लागि बिल पूर्ण बिभिन्न सुरूवात विन्दू प्रयोग गर्दछ। तपाइँलाई स्टार्टरको रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ र त्यसैले स्टार्टर छुटको एक मौका खडा तीन संचयी मापदण्डमा निर्भर गर्दछ। मापदण्ड निम्नानुसार छन्:
अधिग्रहण गर्ने उमेर। एक स्टार्टर मानिन्छ, तपाईं १ 18 र years 35 वर्ष बीचको हुनुपर्दछ। Limit 35 को माथिल्लो सीमा बिलमा प्रयोग भएको छ किनभने एएफएमको अनुसन्धानले देखाएउछ कि कम्तीमा 35 18 बर्ष भन्दा कम उमेरमा क्रेतालाई लाग्ने खर्च उठाउन औसतन गाह्रो छ। थप रूपमा, १ 15 बर्ष भन्दा कम सीमाको साथ छुटको आवेदनको लागि, तपाईंको उमेरको आवश्यकता लागू हुन्छ। यस कम सीमाको उद्देश्य सुरूवातकर्ताहरूको छुटको अनुचित प्रयोग रोक्नको लागि हो: कानुनी प्रतिनिधिहरूले नाबालिग बच्चाको नाममा घर खरीद गर्दा यस छुटलाई प्रयोग गर्न सम्भव छैन। यसबाहेक, उमेर सीमा सीमित एक अधिग्रहणकर्ताले एक घर धेरै अधिग्रहणकर्ताहरूद्वारा अधिग्रहण गरेको अवस्थामा पनि, हरेक अधिग्रहणकर्ताको लागि लागू गर्नुपर्दछ। यदि एक मध्ये एक प्राप्तकर्ता १ XNUMX बर्ष भन्दा पुरानो हो भने, निम्न यो खरीददारलाई लागु हुन्छ: आफ्नै तर्फबाट कुनै छुट हुँदैन।
अधिग्रहणकर्ताले पहिले यस छुटलाई लागू गरेका छैनन्। उल्लेख गरिए अनुसार, शुरुवातकर्ताहरूको छुट एक पटक मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो नियम उल्ल .्घन भएको छैन भनेर सुनिश्चित गर्न, तपाईंले स्पष्ट, दृढतापूर्वक र आरक्षण बिना लिखित घोषणा गर्नु पर्छ कि तपाईंले पहिले स्टार्ट-अप छुट लागू गर्नुभएको छैन। यस लिखित बयान त्यसपछि सिभिल-कानून नोटरी बुझाउनु पर्छ हस्तान्तरण कर मा छूट को उपयोग गर्न को लागी। सैद्धान्तिक रूपमा सिभिल-कानून नोटरीले यो लिखित भनाइमा भरोसा गर्न सक्दछ, जबसम्म उसलाई थाहा थिएन कि यो बयान गलत तरिकाले जारी गरिएको थियो। यदि यो पछि देखा पर्‍यो कि तपाइँले यस अधिग्रहणकर्ताले कथन जारी गरे पनि छुटको लागि लागू गर्नुभयो, एक अतिरिक्त मूल्या assessment्कन अझै गरिनेछ।
अस्थायी रूपमा अधिग्रहणकर्ताले मूल निवासको रूपमा घरको प्रयोग। अर्को शब्दहरुमा, शुरुवातकर्ताहरूको छुटको दायरा केवल घरमा बस्ने व्यक्तिलाई मात्र सीमित छ। यस सर्तको सन्दर्भमा तपाईलाई एक अधिग्रहणकर्ताको रूपमा पनि स्पष्ट, दृढ र कुनै आरक्षण बिना नै यो घोषणा गर्नु आवश्यक छ कि घर अस्थायी रूपमा र मूल निवास बाहेक अन्य प्रयोग हुनेछ, साथै यो लिखित बयान प्रस्तुत गर्न सिभिल-कानून अधिग्रहण भन्दा पहिले अधिग्रहण उनीहरु मार्फत जान्छ भने। अस्थायी प्रयोगको अर्थ हो, उदाहरणका लागि, घरको भाडा वा छुट्टीको घरको रूपमा यसको प्रयोग। जबकि मुख्य निवास मण्डली संग दर्ता र एक जीवन निर्माण सहित (खेल गतिविधिहरु, स्कूल, पूजा स्थान, बाल हेरचाह, साथीहरु, परिवार सहित)। यदि एक अधिग्रहणकर्ताको रूपमा, तपाईं नयाँ घरलाई तपाईंको मुख्य निवासको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्न वा अस्थायी रूपमा १ जनवरी २०२१ देखि, तपाईंलाई अझै 1% को सामान्य दरमा कर लगाइनेछ।
यी मापदण्डको मूल्या ,्कन, र यसैले तपाईं छुटको आवेदनका लागि योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्नको उत्तर, घर अधिग्रहण भएपछि लिन्छ। अधिक विशेष रूपमा, यो त्यस्तो क्षण हो जब बिक्रीको डीड नोटरीमा तानिन्छ। नोटरीयन कार्य कार्यान्वयन हुनुभन्दा तुरुन्तै दोस्रो र तेस्रो सर्तसम्बन्धी लिखित विवरण पनि नोटरीमा पेश गर्नुपर्नेछ। खरीद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको त्यो क्षण लिखित बयानको मुद्दाको लागि सान्दर्भिक हुँदैन, जसरी यो शुरुवातकर्ताहरूको छुटको अधिग्रहणको लागि हो।
घर किन्नु स्टार्टर र लगानीकर्ता दुबैका लागि महत्त्वपूर्ण चरण हो। के तपाईं कुन श्रेणीसँग सम्बन्धित हुन जान्न चाहानुहुन्छ र कुन उपायहरू तपाईंले २०२१ देखि खातामा लिनुपर्दछ? वा तपाईंलाई छुटको लागि आवश्यक वक्तव्य बनाउन सहयोगको खाँचो छ? त्यसपछि सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More। हाम्रो वकिलहरू घर जग्गा र करार कानून मा विशेषज्ञ छन् र तपाईंलाई मद्दत र सल्लाह प्रदान गर्न खुसी छन्। हाम्रो वकिलहरु पनि फलो-अप प्रक्रियामा तपाईलाई सहयोग गर्न खुसी हुनेछन्, उदाहरण को लागी जब यो चित्र कोर्ने वा खरीद अनुबन्धनको कुरा आउँछ।
अघिल्लो पोस्ट शीर्षक कायम
अर्को पोस्ट निर्देशकको रुचि को द्वन्द्व